Walii baquu baantan hin fudhannuu! Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWalii baquu baantan hin fudhannuu! Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed
Walii baquu baantan hin fudhannuu! Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed gaggeefamu ni mormina jedhu Qerroon karra millee!!
Qeeroofi Qarreen Harargee (ilmaan Ituufi Humbaanaa) fincila dhoosee jira, Qobbootti.
Ijoolleen Elemoo Qilxuu diinatti dura qawwee fudhatan. Ammas Qawween harkaa hin buune. Diina afaan qawween nu gabroomsite afaanuma qawween akka ofirraa deebisan isaantu nu barsiise.
Ijoolleen Elemoo durii kan Jaal Bobbaas har’aa jabaadha!
Oromo protest:-G/H/ bahaa magaalaa karramillettii guyyaa arraa (20/09/2019) hiriirrii mormii gaggeefamaa ole.Dire dhawan Dirra keenya ! Walii baquu baantan hin fudhannuu! Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed gaggeefamu ni mormina jedhu Qerroon karra millee!!
Kamisee rakkootu jira.karaan gara qalloo geessu dargaggootaan cufameera.
Qeerroo walloo tuttuquun abidda ofitti qabsiisuudha!!ammaan booda nafxenyaan magaalaa kamisee keessa darbitee finfinnees tahe bakka biraatti socho’uu hin dandeessu.
Nama gaargaruf nama tahuun qoftii gahadha !!Obboleesi keenya kaan Suraa isaa armaan gaditi Argitan kuni #Mohammed Adam umar jedhama Yuunivaristii haramayati hojata kutaa meeshale qonnaa yo ta’u gaafa Fulbaana 11/2012 hojii nyaata beelladaa qopheesu irraa osoo jiruu mashinaa hojiiraa jiruraatii kufee harka isaa Lameenu dhabee jiraa.!! Obbo mohammed Adam nama bulti qabu fi Abbaa ijoollee 2 tti akkuma nama kamiitu jirenyaa isaa fooyyesuuf tattafatus gaalma gahuu hin dandenyee qaama guutu dhalatee guyyaa keessa harka isaa lameen dhabeera !! Maati isaaitis kufaati hamilee fi dinagdee hamaa keessa waan jiruuf waan qabnun biraa haa dhabbanuu ! Rabbiin qaama guutu isiin umee guyyaa keessa isiin irraa hin fudhatin oromookoo !!!!!
Karaan ittiin gargaartan Baankii Daldalaa Etophiya Lakk heregaa-1000070038157 .
Bilbilaan isa qunamuf 0915126348/ 0910150874.
Galatooma sher walif godhaa !
አብይ ሆን ተብሎ ታስቦበት ኦሮሞን ለማጥፍት የተዘጋጀ ስው ነው ኦሮሞ የታል በዚህ ካርታ ውስጥ ጎበዝ ???